အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျွန်မတို့ ဒေသရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ သင်္ကြန်နေ့
22 Responses to “ကျွန်မတို့ ဒေသရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ သင်္ကြန်နေ့”
ဗပာုသုတတွေ အများကြီး ရသွားတယ် အစ်မချော။ ကျေးဇူး။ နှစ်သစ်မှာ အစ်မချောလည်း ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။ (ဒါနဲ့လေ အစ်မဘေဘီ, baby taster ကိုပါ တစ်ခါတည်း နှစ်သစ် ဆုတောင်းလေး ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ အစ်မဘေဘီ cbox လေးမတွေ့တော့လို့။ အစ်ဘေဘီလည်း ချစ်တဲ့ မိသားနှင့် အတူ နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာ ရွှင်လန်းပါစေနော်)
မချောတို့ ဒေသလေးရဲ့ သင်္ကြန်ကာလ မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်များ ရေသပ္ပါယ်တဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာလေးကို ဖတ်ရလို့ စိတ်ကြည်နူးမိပါတယ်၊
မချော တို့ ဒေသလေးရယ်၊ မိသားစုရယ်၊
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ၊ အားလုံးတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေ၊ မချော ဘလောဂ့်လေးကို လာလည်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်း တိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေ၊ ချမ်းမြေ့ကြပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မချောတို့ဒေသရဲ့ သင်္ကြန်အချိန်ခါ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလေးကို ကြည့်သွားပါတယ်။
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ မချောရေ...။
တနေရာစီမှာ ဓလေ့တမျိုးစီ ရှိကြတယ်နော်... သိပ်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့လေးတွေပါ။ ရာဇမတ်ကာထားတာတွေ ကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်ကို သတိတွေရမိတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေက အရမ်းသပ္ပါယ်တယ် အစ်မ :)
ယဉ်ကျေးမှု့ အပြည့်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာ စရာကောင်း၊ ကြည်နူးစရာကောင်း၊ ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝ ပျော်စရာကောင်း လိုက်တာ
ပျော်စရာကြီးနော် ..း))
စာတွေဓါတ်ပုံတွေက အရမ်းကို လွမ်းရပါတယ်။
ဘုရားပုံတွေ ဖူးမြင်ရတာ တကယ် ကြည်လင်ဝမ်းသာရတယ်။
ကြည်နူးဖွယ် ယဉ်ကျေးတဲ့ သင်္ကြန်ပါ
ရိုးရာအချိန်ခါမှာ ကုသိုလ်ယူနေကြတာတွေမြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဗျာ
အင်မတန် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာဓလေ့ အစဉ်အလာလေးပါပဲ၊ ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မချော..။
This is Tai (Shan traditional) Thingyan Festival in Kachin State. All Tai (Shan) Villages in Kachin State follow this custom. When I wasachild I still remember we use to wait near the Buddhist statues and splash the water to villagers who come and pour water to Buddhist statues.
ကောင်းမွန်တဲ့ ရိုးရာဓလေ့ မို့ အစဉ်အဆက် မပျက်ကွက်
မပျောက်ကွယ်သွားအောင် လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်းနိုင်
ပါစေလို့ ကျေးလက်သားလေးက ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ဗျာ..။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနှစ်သစ်ကူးဖြစ်ပါစေ.
ဘုရားစင်းတုတော်တွေက သပ်ပါယ်လိုက်တာ ဖူးသွားတယ် အစ်မရေ ကျေးဇူးပါ ။
ပျော်ရွှင်သော မြန်မာမင်္ဂလာနှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေ..အေးချမ်း အောင်မြင် ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းသော ဘ၀လေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
ကြည်နုးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ တောဓလေ့လေးပါ၊ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်၇တာလည်းအလွန်ပဏာ ရလှပါတယ်။ နောင်နှစ်ကျ၇င် အလည်ခေါ်မလား၊ အောင်မြင်ပါစေ။
ရေသပ္ပာယ်တဲ့ပုံစံ ဓလေ့တွေ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူဘူးနော်။ စိတ်ဝင်စားစွာ လာရောက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်ရှင်။
ဒီကိုလည်းပို့စ်တွေ လာတင်ပေးဖို့ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ အားကိုးစွာ ဖိတ်ပါတယ်နော် မချော။ www.moba4all.org ပါ။ (တွေ့တိုင်းဖိတ်မှာနော်။ မလာမချင်း ။း)
အဲဒီရိုးရာလေးက ကျနော်တို့အရပ်က ရိုးရာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ဘုရားကို သီးသန့်ပင့်ပြီး ယာယီစံကျောင်းအနေနဲ့ ဆောက်လုပ် ပူဇော်ထားတယ်။ အဲဒီမှာ ရေလာပူဇော်ကြတာလေ။ အခမ်းအနား အစီအစဉ်လဲ အားလုံးနီးပါး အတူတူပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က ရွာပေါက်စနလေးဆိုတော့ မချောတို့လို စည်စည်ကားကားတော့ မရှိဘူးပေါ့။
မကြီးချောတို့အရပ်ကဓလေ့လေးကို အခုမှ သိရတယ်....အရင်က တစ်ခါမှ မကြားဘူးဘူး......အခုလို သိအောင်တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မကြီးချော....